Ny minisitry Belzika Joke Schauvliege dia nametra-pialàna taorian'ny confessions mikasika ny fametrahana fihetsiketsehana amin'ny alàlan'ny sekretera: Martin Vrijland
Minisitry ny Belzika Joke Schauvliege dia nametra-pialana taorian'ny confession mikasika ny fametrahana fihetsiketsehana amin'ny alàlan'ny sekretera miafina
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 Febroary 2019	• 12 Comments
Ny minisitry ny minisiteran'ny tontolo iainana Joke Schauvliege, minisitry ny tontolo iainana Joke Schauvliege, dia tsy maintsy niala tamin'ny androany satria misokatra loatra amin'ny karazana Belzika ao amin'ny AIVD Holandey (fanompoana miafina) izy. Tamin'ny fandefasana ny Taom-baovao Syndicate Jeneraly vao haingana dia nanao ireto fanambarana manaraka ireto izy (jereo ny horonan-tsary), izay ambarany fa ny hetsi-panoheran'ny klioba dia voalamina amin'ny serivisy. Toa niditra tao amin'ny 2.0 tetikasa ny ady amin'ny fanesorana ireo fomba fanao ireo.
Eto amin'ity tranokala ity dia matetika no nampiseho fa henjana ny hetsi-panoherana ary tsy azo lavina fa natao ho an'ny mason'ny fakantsary eo ambany fitarihan'ny, ohatra, Powned. Rehefa manomboka miditra amin'ny mponina ny tantara toy izany dia tsy misy afa-tsy zavatra iray ihany: asehoy ny fampiratiana mba hamelezana ny tantara. Izany dia toa ny anjara asan'ny opera savony vaovao miaraka amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminay. Afaka namoaka ny sarin'i Joke Schauvliege, nandrehitra ny baomba ary avy eo dia nanongotra ny tantara.
Afaka manao teny maro momba izany isika, saingy ny minisitra dia tsy tonga amin'ny toerana misy azy fotsiny. Ny minisitra dia mpikatroka izay tsy maintsy manohy ny endriky ny demokrasia sy ny lahateny na fanambarana rehetra, amin'ny fisehoan-javatra matetika (matetika eo ambanin'ny cameras), dia heverina ho heverina. Ny minisitra ihany no manadio ny saha ho toy ny fanodikodinana na hametahana olana; Aorian'izay izy ireo dia mahazo poketra matanjaka amin'ny fiandrasana vola, arahin'ny asa tsara, ohatra, banky iray na asa iray karama tsara.
Azonao atao ny manavao ny fahatsiarovanao eto part 1, part 2 en part 3 jereo ireo fampisehoana natao tamin'ny Zaanse (Poelenburgse) relay vlogger tao 2016, izay nataon'ilay mpikatroka Ismail Ilgun tao amin'ny sarintany. Io fisavoritahana io dia nirongatra indrindra tamin'ny tanjona handrarana ny sarimihetsiky ny mpiasam-panjakana ao amin'ny birao. Amin'ny 11 Aprily 2016 Nosoratana aho ny fomba fijerin'ny Antoko Pegida mifanohitra amin'ny fihetsiketsehana Antifa, anisan'izany ny rotaka sy ny fisamborana rehetra, dia nipoitra tanteraka. Noho izany dia manana porofo mafy isika fa ny fombafomba toy izany dia mitranga ary manisa izany fa tsy dia misy fahasamihafana loatra amin'ny mpifanolo-bodirindrina atsimo.
Miaraka amin'izany ny fandroahana sy ny fahitana fialantsasatra ara-pihetseham-po sy fialantsiny avy amin'i Joke Schauvliege (tsarovy fa mpilalao ny mpanao politika) ny roa vorona dia tratran'ny iray. Izy dia nifandray tamin'ny lehilahy Alternative ny media belza Peter Vereecke; lehilahy iray izay nihaonako nandritra ny fivoriana nataon'ilay olona nijoro teo am-pelatanan'ny fampitam-baovao hafa any Holandy; satria Marcel Messing. Fotoana fohy taorian'izay nivoaka fa ny fampahalalam-baovao mahazatra dia tena kliobakaka. Nanomboka tamin'izay dia niantso ny fanoherana mifehy aho. Ny asan'ny fanoherana mifehy (toy ny ity lahatsoratra ity izay nofaritana indray) dia ny tambajotra fiarovana. Raha vantany vao tafapetraka ireo "mpandinika mahay", dia miantoka ny fivoahan'ny baomba izay natsangana tao ambany elatry ny sambo. Amin'izany fomba izany dia manangona tsindry ratsy ho an'ireo olona mila manakiana ianao raha ilaina ary te hikotika "fikomiana".
Azontsika antoka fa ny endrika karazana hetsi-panoherana dia tarihin'ny tolotra miafina, mampiasa tambajotra lehibe iray Inoffizieller Mitarbeiter. Tsy ny fikasana no hitranga ary ny Ministera Joke Schauvliege dia namela ilay baomba tao amin'ny farany ambany mba hizara.
Lisitry ny rohy loharano: hln.be
Tahaka ny fandrarana ny fandraràna ny mpilalao horonantsary eny an-dalambe, 3 volana taorian'ny sarimihetsika Zaandam vloggersrel
PowNed mametraka ny vondrom-bahinin'i Poelenburgse eo amin'ny sehatra miaraka amin'ireo mpilalao, fanampim-panazavana ary fitarihana
Horonantsary fanamarihana fa ny horonantsary JIT MH17 an'ny BUK Telar dia natao ho an'ny loza voajanahary: i Bellingcat dia mianjera amin'ny harona
Camiel Eurlings, Boef, Ismail Ilgun, #MeToo ny fahitana mazava sy ny loza ateraky ny 'olona'
Tags: ankapobeny, België, Belza, Farm Syndicate, Featured, nalaina, Ismail Ilgun, Joke Schauvliege, tontolo iainana, Taom-baovao, fandroahana, Peter Vereecke, teny, lahatsoratra, Video
5 Febroary 2019 ao amin'ny 22: 22
Araka ny nosoratako dia efa notaterina ny zava-drehetra any Holandy. Izany dia nitranga tamin'ny firenena rehetra ary koa EU in Belzika. Ireo izay mikarakara izany dia tena sampana miafina. Ireo no ireo izay mamaritra izay fanompoam-pivavahana, mpikambana ao amin'ny parlemanta mety raha mba misy antoko vaovao tokony namorona, inona no misy dikany tsy maintsy nilaza tamin'ny sarambabem-bahoaka sns ny olona tsy miafina services, ny mpamily teo an-tampon'ny izany dia sasany mpitsara, ireo mpanana orinasa, ny fitantanana lehibe eo amin'ny fiainana sns. Ataon'izy ireo mangingina ny asa fanompoana miafina. Faharoa depiote sns tsy mahalala izany, mety tsy mahalala izany. Ilaina ny mahafantatra fa ny fampiharana foana dia ampiharina. Ary eny fa ho ahiahiana ny mahazatra izay miasa ho an'ny asa miafina. Ny mahazatra ahiahiana fitondrana eo ambany izay keven tokony horaisina amin'ny fitaka, fitaka, sns iklegaliteit foana.
5 Febroary 2019 ao amin'ny 23: 25
Saingy eny, ahoana no ahafahantsika mahatsikaritra mora amin'ny tanora (ny ho avy).
Ampirisihin'ny haino aman-jery ny tanora mba hilalao amin'ny zavatra mbola misy
tsy izany !!!
tsy voaporofo, satria ho avy!
ary, tsy azo hazavaina !!!
Ny haino aman-jery dia nikasa ny hampiasa ny CO2 kolder ary ny tanora dia gaga amin'ny
ny fanafihana mitebiteby. (Doe Maar, Popgroepje: Fearmen miaraka amin'ny baomba hianjera, bah)
Ny Air 78% nitrogen, 21% oxygen = 99%
1%, izay 0,0016% fotsiny dia mety !!! CO2 entona avy amin'ny olona voavonjy satria 96% dia hita taratra amin'ny natiora natsangana, ny tanora sasantsasany izay soso-kevitro mba handehanana an-dalamby na fiaramanidina ary azo antoka fa handeha tsara
6 Febroary 2019 ao amin'ny 12: 19
Eny tokoa, izy ireo dia hita fa efa manatsara ny zava-tonga, fa na inona na inona-panjakana vaovao fahatahorana azy tany amin'ny endriky ny Gang ny Nivelles ary indray, ny Mavo akanjo lava ara-tsaina rehetra izany ady hamely ny mponina sivily.
6 Febroary 2019 ao amin'ny 12: 26
Ohatra vao haingana ny fanafihana baomba tany Paris
Ny Elysée sy «Gladio B»
6 Febroary 2019 ao amin'ny 15: 54
@riffian, loharanom-baovao tsara boozer Juncker tompon'andraikitra amin'ny asa any Luxembourg Gladio mandoa mazava ho heloka bevava, manaporofo fa ny horohoro rehetra hitaraindraina ny tato anatin'ny taona vitsivitsy dia mikendry mihetsika ao amin 'ondry iray izay iray fomba' an-tsitrapo 'kivy ny fahalalahana izay izany mitranga koa.
15 Febroary 2019 ao amin'ny 15: 51
Izany dia fandrosoana lehibe.
"Ireo mpikaroka ao amin'ny Gang of Nijvel dia manadihady raha misy ifandraisany amin'ny fahafatesan'i Roger Romelart (78) taloha ary ny fisamborana vao haingana tamin'ny roa amin'ireo mpiara-miasa aminy taloha. Omaly, nisy fikarohana an-trano natao niaraka tamin'ilay naman'ny maty. Ireo ankizy tao Romelart dia nadinadinin'ny Bendespeurders amin'izao fotoana izao. Ny vatany dia nafindra tany Charleroi noho ny fanodikodinana. "
19 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 17
Eny, izany no zava-misy, fa ny zava-mitranga rehetra manodidina ny ministra Belzika dia fitaka mampihetsi-po. Izany no tena zava-miseho ary tokony hanjavona eo amin'ny sehatra ...
François A. (70), iray amin'ireo mpanadihady teo aloha izay nosamborina nandritra ny fanadihadiana ny Gang of Nijvel, dia navoakan'ny mpitsara mpanao famotorana tao anatin'ny fepetra sasany. Izany dia mitatitra ny VRT NWS. Ny mpikatroka taloha, Philippe V., dia navotsotra tamin'ny Alakamisy. Ny roa lahy dia ahiahina ho nanodikodina ny fikarohana momba ny zavatra hita tao amin'ny fantsonan'i Ronquières tamin'ny volana novambra 1986.
Samy nosamborina tamin'ny volana Janoary ny A sy V.. Izy ireo dia mety ho nandray anjara tamin'ny fanodikodinam-pandràrana ilay finday tao amin'ny fantsonan'i Ronquières tamin'ny volana novambra 1986. Nisy ny fitaovam-piadiana avy amin'ny fandrobana tao amin'ny Delhaize van Aalst, toy ny kitapom-bola sy ny fanamarinana. Na dia izany aza, ny ekipa mpanadihady vaovao eo ambany fitarihan'ny mpikaroka mpitsikilo Martine Michel dia nieritreritra fa napetraka io sehatra io.
Ny A sy V. dia hahafantatra bebe kokoa momba izany ary tsy namoaka vaovao lehibe. Niahiahy ny mpampanoa lalàna federaly fa samy manana tendrom-poana izy ireo izay nilaza ny toerana misy ny fitaovam-piadiana
6 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 37
Ahoana in Belzika (izany hoe Brussels) nitranga momba ny hetsi-panoherana dia mazava ho afovoan fehezin'ny sangany globalists amin'ny fitoriana ny toetr'andro fifanarahana (mifototra amin'ny lainga) haingana fahalalahana ny olom-pirenena avy amin'ny Vondrona Eoropeana mba hiboridana Paris, dia tsy maintsy 😀 handoavana izany, satria ny zava-misy ianao CO2 dian-tongotra tsy niraharaha fa nutrient manan-danja eo amin'ny natiora. Ity fitsipika manaraka ity dia ampiasaina:
Ity fihetsika ity dia misy antony efatra, kely fotsiny ny fampitomboana. Noho izany dia manana zavatra eo ankavia ianao, CO2, izany no tokony hataonao, ary izany dia hiorina amin'ny isan'ny olona. serivisy, ary ny CO2 izay navoaka isaky ny angovo. Andeha hojerentsika ny tsirairay amin'izy ireo, ary jereo ny fomba ahafahantsika manakatra an'io amin'ny zero. Angamba ny iray amin'ireto nomerao ireto dia hanana tsara tarehy akaikin'ny zero.
Raha toa ianao namela ity hitranga ity, amin'ny maha-mponina anao, dia mendrika ny hibaiko an'io karazana psychopath io ihany koa ianao
Gladio-Luxembourg: Noterena hiala i Juncker
"Ny praiminisitra Mandritra izany fotoana izany dia tsy afaka manaiky ny fitohizan'ny ny zava-miafina ny Atlantika tontolo Alliance, fa tsy maintsy hiangavy ny mametra ny foto-kevitra ho faran'izay kely noho ny andraikiny ao anatin'ny Eurogroup."
6 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 41
Ary ny tsy firaharahiana fa manohy manapaka hazo isika, toy ny hoe mitsangana eo amin'ny lalan'ny 5G masts izy ireo ...
Ny hazo dia mivadika CO2 amin'ny oksizenina. Mamboly hazo ..
6 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 50
Tsara ihany koa fa tokony ho azo antoka tsara ny fifandraisana amin'ny duplex amin'ny hoavy 😀 tsy misy tokony havela ho an'ny vintana any Etazonia dia efa tena lavitra loatra ny fisedrana ...
"Ny vanim-potoana ara-teknôronika dia mitaky ny fisehoan'ny fiarahamonina mifehy kokoa. Ny fiaraha-monina toy izany dia hotsaroana amin'ny elita, tsy voafehy amin'ny soatoavina nentim-paharazana. Tsy ho ela dia ho azo atao ny manara-maso akaiky ny mpitsoa-ponenana tsy tapaka ary manohy hatrany ny rakitra feno ny fampahalalana manokana momba ny olom-pirenena. Ireo antontan-taratasy ireo dia mety hiantsoroka avy hatrany avy amin'ny manampahefana. "
"Amin'ny fiarahamonina matanjaka ara-teknolojia, ny fironana dia ny hanohana ny fampandrosoana ny teknolojia farany mifandraika amin'ny fanodikodinan'ny fihetseham-po sy ny antony mifehy."
7 Febroary 2019 ao amin'ny 12: 00
Ny zava-drehetra any Holandy dia notarafina: namaky marika an'arivony aho tamin'ny Malieveld.
Mampalahelo ny tsy fahitako ny kardinaly mavo. Fiovan'ny fitondrana
Miandrandra izany aho. Ny olo-tsotra dia mamaritra ny ho avin'izy ireo amin'ny farany fa tsy ireo olona ahiahiana.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 05: 21
Tena manosika ireo mpilalao izy ireo na aiza na aiza.
« Ny fampielezan-kevitra lainga amin'ny haino aman-jery manodidina an'i Venezuela
Donald Tusk "Manontany tena aho hoe manao ahoana ny toerana manokana any amin'ny helo ho an'ireo nanohana ny Brexit" »
Total visits: 8.553.893